News Collection: उकेशको न्यूड फिल्म !
उकेशको न्यूड फिल्म !
'एडल्ट' निर्देशक उकेश दाहाल न्यूड फिल्म 'किन-किन' निर्माणमा जुटेका छन् । आफ्नै लगानी र निर्देशनमा बन्न लागेको दोस्रो सिनेमा अघिल्लो 'पलपलमा'मा भन्दा पनि 'बोल्ड' र 'सेक्सी' हुने उकेशको भनाई छ । यौनकर्मी पुरुषको कथामा आधारित 'पलपलमा'को राम्रो रिभ्यूबाट उत्साहित उनी आफ्नो दोस्रो प्रोजेक्टका लागि अहिले 'कास्टिङ डायरेक्सन'मा व्यस्त छन् । पक्का छ -'पलपलमा'भन्दा पनि उत्तेजक हुने भनिएको उनको अपकमिङ फिल्म 'किन-किन'ले एडल्ट सर्टिफिकेट पाउनेछ । जसलाई उनी 'न्यूड सिनेमा' बताउँछन् ।
तन बूढो भएपनि मन बूढो हुँदैन भन्ने शाष्त्रिय उखानमा आधारित हुने 'किन-किन'मा अघिल्लो फिल्मका तीनजना कलाकार दीलिप रायमाझी, सुजाता सिटौला र शशी खड्का कमब्याक हुँदैछन् । अनस्क्रिनमा राम्रो केमेष्ट्री मिलेको जोडी राजेश हमाल र करिश्मा मानन्धरको मुख्य भूमिका रहनेछ फिल्ममा । राजेश-करिश्मा दुवैले साइन गरिसकेका छन् । अभिनेता कर्म पनि सर्पोटिङ एक्टस्रका रुपमा देखिँदैछन् । मल्टिस्टारर मूभी बनाउने चाहना छ उकेशको ।
सत्तरीको दशकको प्रेमकथा गेटअप, हेयरस्टाइल र लोकेसनमा देखापर्दैछन् सबै कलाकार । ४३ वर्षअगाडिको स्वरुप, गेटअप र स्टाइलमा राजेश र करिश्मालाई दर्शकले हेर्न पाउनेछन् । काठमाण्डू सहरलाई पनि सत्तरीको दशकको स्वरुपमा देखाइने भएको छ । बलिउड सिनेमा 'वन्स अपन अ टाइम इन मुम्बइ'बाट प्रभावित भएको अनुमान गरिएपनि उकेशले यो आरोपलाई खण्डन गरे । 'नेपाली मौलिकतामा त्यतिबेलाको सापेक्षतामा प्रेम र समाज पस्कन लागेको हुँ' उनले भने । फन्टासी श्रेणीमा बन्ने 'किन-किन'मा भौतिक द्वन्द्वका दृश्यहरु नसमेटिएको जानकारी उनले गराए ।
चलचित्रको स्क्रिप्ट उकेश आफैले लेखेका हुन् । महानायक हमाल यो सिनेमामा साहित्यकार पात्रका रुपमा हुनेछन् । रोचक कुरा उनै साहित्यकारले देखेको एउटी नाङ्गी युवतीको तस्विरलाई चलचित्रमा समेटिने भएको छ । नेपाली चलचित्रको इतिहासमा पहिलोपटक कुनै नाङ्गी आइमाइलाई फिल्ममा उतार्न लागेको उकेशको कथन छ । तर उक्त दृश्यमा को नाङ्गिन तयार हुन्छ टुंगो लागिसकेको छैन । नांगिने कलाकारको खोजि गरिरहेका छन् उकेश । आगामी माघको अन्त्यबाट फ्लोरमा जाने बताइएको प्रोजेक्टको अहिले संगीतमा काम भैरहेको छ ।